Servo, okusha okuvela eMozilla. | Kusuka kuLinux
pedrini210 | | Aplicaciones, I-GNU / Linux, Izaziso, Ukuhlela
IMozilla ngokulangazela kwayo ukwenza ngcono iFirefox isinikeza okuthile okusha, ukunikeza inqubekela phambili ekwakhiweni kwalesi siphequluli esidumile. Ngakho-ke IServo, injini entsha yeFirefox, izotholakala ngoJuni lokho kuzovela esikhundleni sikaGecko futhi lokho kumayelana gxila ekusebenzeni. I-Servo izoba yingxenye yesakhiwo sesiphequluli bese kuthi nezici ezintsha ezifakwe kwiFirefox.
Ekufuneni ukuzinza, ukwakhiwa kwalobu buchwepheshe kusebenza ngolimi lokuhlela kudalelwe ukuthola i-máukuqina nokuphepha, ngaphezu kwesakhiwo esisekelwe kubuchwepheshe obusha kakhulu bekhompyutha. Le njini ayihloselwe ukufaka indawo yeFirefox, kepha ukuletha uhla olusha lwezici kungxenyekazi nemikhiqizo yeMozilla.
Olunye ucezu lolwazi ulimi lokuhlela olusetshenziselwe le njini, okuthiwa Rust; ezikhethekile ngezinhlelo zokusebenza zewebhu futhi zakhelwe isivinini, ukuzinza kanye nokuvumelana kwemali.
Isebenza ezinhlelweni ezisheshayo, ivimbela ukuhlukaniswa, futhi iqinisekise ukuphepha kwentambo. Ungagcina lezi zinhloso ezintathu ngaphandle kokuba nomqoqi kadoti; Lesi sici sikwenza okuhle uma kuqhathaniswa nezinye izilimi ezingasebenzi kahle ekushumekeni ezinye izilimi, izinhlelo ezinesikhala esithile nezidingo zesikhathi, nokubhala ikhodi esezingeni eliphansi, kanye nabashayeli bamadivayisi nezinhlelo zokusebenza. Inezinzuzo kunezinye izilimi zokuhlela zamanje ngenxa yokuthi inochungechunge lwamapharamitha wokuphepha ngesikhathi sokuhlanganiswa, okungabangeli ukulayisha ngokweqile esigabeni sokubulawa.
Phakathi kwezinhloso zalo, lolu limi luhlose ukukhipha ukukhishwa okungabizi izindleko, yize okukhishwayo kubonakala njengolimi olusezingeni eliphezulu. Noma kunjalo Ukugqwala kusavumela ukulawulwa okuqondile njengolimi olunezinga eliphansi.
Ukwethulwa kokusha eMozilla kuzovumela abasebenzisi abaphethe lesi siphequluli, bazame futhi banikele abakubona kudingekile ekuthuthukisweni kwaso. Belangazelela nokwenza ngcono imikhiqizo yeMozilla, onjiniyela bayo basebenzela ukwethula obunye bobuchwepheshe obusetshenziswa eServo beGecko. Ukuze izinto ezingcono zingeniswe kokugcina.
Njengamanje injini entsha iyasekela IFirefox OS, iLinux, i-OS X, i-Android neWindows, okwenza ikwazi ukuzivumelanisa nezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene nezisetshenziswa kakhulu. Kuyafaneleka ukukhumbula lokho IServo yiphrojekthi efuna ukujabulisa abathuthukisi abanesifiso sokunikela ngemibono yabo. Ngakho-ke, uma ufuna imininingwane ngomphakathi wabathuthukisi abasebenzisana neServo, ungakuthola lokhu isixhumanisi noma ungajoyina uhlu lwamakheli i-dev-servo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Servo, okusha okuvela eMozilla.
I-servo nganginaso iso kulo nyaka odlule futhi ngalinganisa ukuthi esikhathini esifushane bazoyifaka ku-firefox os ukuze babe nolimi lokugqwala lokuthuthukiswa kwezicelo ze-firefox os kodwa akukho okunye okwenzekile kuyihlazo
I-servo nganginaso iso kuyo ngonyaka odlule futhi ngacabanga ukuthi esikhathini esifushane bazoyifaka ku-firefox os ukuze babe nolimi lokugqwala lokuthuthukiswa kwezicelo ze-firefox os kodwa akwenzekanga lokho, kuyihlazo